” अब म हरो बन्छु ” भन्दै लामो समयपछि मिडियामा आए अशोक दर्जी ! अशोकको कुरा सुनेर भावुक भए पत्रकार ( हेर्नुस भिडियो ) – Nepal Trending
” अब म हरो बन्छु ” भन्दै लामो समयपछि मिडियामा आए अशोक दर्जी ! अशोकको कुरा सुनेर भावुक भए पत्रकार ( हेर्नुस भिडियो )
On ९ आश्विन २०७६, बिहीबार ०९:०९
काठमाडौं : सानै उमेर बाट नै निकै चर्चा कमाउन सफल भएका भाइरल वाल गायक अशोक दर्जीको स्वरमा ‘मन बिनाको धन ठुलो’ भाग २ ‘बा आमा’ बजारमा आएको छ । बुधवार सामाजिक सञ्जाल युट्युव मार्फत सो गीत सार्वजनिक भएको हो । उक्त गीत मा शब्द सङ्गीत टंक बुढाथोकीको रहेको छ ।
अशोक दर्जीको सर्वाधिक रुचाइएको पहिलो गीत ‘मन बिनाको धन ठुलो की धन बिनाको मन’ धेरैले मन पराएपछि भाथ २ पनि वजारमा ल्याएको बुढाथोकीले जनाएका छन् । अझै पनि त्यस्तै सामाजिक सन्देश दिने खालको शब्द र माहौल बने अर्को अँश पनि ल्याउने उनले बताए । अशोकको चर्चा सर्वाधिक भयो । अशोक दर्जिको दोस्रो गीत “आमा भन्दा राम्री कोही छैन संसारमा” पनि निकै नै लोकप्रिय गीत हो ।
कसरी कसरी भाग २ बजारमा सार्वजनिक गरिसकेपछि टंक बुढाथोकी बाआमा बोलको गीतको तयारीमा रहेका थिए । उनले सो गीत वजारमा ल्याउन लागेको जानकारी यस अघि नै सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत गराएका थिए । धेरै लामो समय नाचेर विश्वरेकर्ड कायम गरेका युवतीहरु गीतमा फिचर्ड गरिएको छ ।
टंकले गीत निकै क्वालिटिको बनेको बताएका छन् । उनले अशोकको श्वरमा निकै निखार आएको पनि उनले बताए । मन विनाको धन ठूलो गाउँदा भन्दा अहिले निकै परिवर्तन भएको बताए । अशोकले पनि आफु मन विनाको धन ठूलो गीत मन पराइदिएका कारण आफु उत्साहित भएको बताए । उनले यो गीत पनि धेरैले मन पराउनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए ।